Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze iyo Herbstluftwm: 5 WMs oo kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan la sii wadi doonnaa tanyada boostada afraad sku saabsan Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib u eegi doonno 5 badan oo iyaga ka mid ah, oo ka mid ah liistadayada 50 hore looga hadlay.
Si taas loo sameeyo, sii wad inaad ogaato dhinacyada muhiimka ah ee iyaga ka mid ah, sida, ma yihiin ama ma jiraan mashaariic firfircoon, in Nooca WM iyagu iyagu, maxay yihiin astaamaha ugu muhiimsaniyo sidee loo rakibay, dhinacyo kale.
“Fluxbox waa maareeyaha daaqadda ee X oo ku saleysan summada Blackbox 0.61.1. Waa wax aad u fudud oo ku saabsan kheyraadka oo ay fududahay in wax laga qabto laakiin wali waxaa ku jira astaamo si khibrad desktop ah looga dhigo mid sahlan oo aad u dhakhso badan. Waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo C ++ waxaana lagu sharciyeeyay shatiga MIT".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ilaa 4 sano.
Waxay bixisaa fayl codsi awood badan leh (barnaamijyo-faylaal ah) oo ay suurtogal tahay in lagu dejiyo cabirro gaar ah oo codsiyada ah (daaqadaha), sida, cabbirka, qurxinta, goobta shaqada ee caadiga ah ee la furayo, dheggenaanta iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay u oggolaaneysaa inay wax ka qabato ku dhowaad dhammaan xuduudaha daaqad ama codsi kasta.
Waxay leedahay feylal muhiim ah oo isu eg (furaha-feylka) oo siiya sahlanaanta dadka aan laheyn jiirka waxayna ka dhigeysaa shaqada mid raaxo leh dhammaan isticmaaleyaasha, maadaama ay u oggolaaneyso in la habeeyo feyl muhiim ah oo sahlaya in la xakameeyo wax walba. , oo ka dhigaysa mid aad uga dhakhso badan isticmaalka menu oo leh kaliya furayaasha, iskudhafka furaha iyo siddooyin muhiim ah.
Waxay bixisaa jaangooyooyin aad u fiican oo kuu ogolaanaya inaad si wada jir ah u daaqadaha daaqadaha u kala bixiso. Muuqaalkan waxaa lagu dari karaa astaamaha "otomaatiga ah" ee lagu bixiyo arjiyada codsiyada, taas oo u oggolaanaysa codsiyada qaarkood in si wada jir ah loo wada hubiyo.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca Xirmada "fluxbox"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maamulaha daaqada oo uu soo saaray Bill Spitzak iyada oo ujeedadu tahay in la isku daro fikradaha ugu fiican ee WM-yada kale ee jira iyadoo la adeegsanayo wm2 codebase, oo uu abuuray Chris Cannam".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ilaa 5 sano.
Waxay isku dayeysaa inay qaadato shaashadda yar ee suurtogalka ah intii suurtagal ah, waana runti yar oo dhaqso badan.
Waxay bixisaa madaxbanaanida badinta badhanka ballaca iyo dhererka. Waxay leedahay bar hawl iyo menu bilow ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho daaqada iyadoo la adeegsanayo isku dhafka furaha «Alt + Tab», waxay taageertaa kombuyuutarro badan. Intaas waxaa sii dheer, "gudiga" iyo "menu-ka bilowga" waxay ku midoobeen hal menu oo pop-up ah oo aan qaadanaynin meel bannaan marka la isticmaalayo.
Waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso daaqadaha aadka u yar yar oo is dulsaaran, si barnaamijyadu ugu dambeyn ay uga faa'iideystaan ​​daaqado badan, halkii lagu qasbi lahaa inay sameystaan ​​hal daaqad weyn oo "mdi" ah. Ugu dambeyntiina, waxay ku habboon tahay WM illaa Motif, KDE, iyo Gnome, waxayna la shaqeysaa barnaamijyada SGI ee u maleynaya 4DWM.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "flwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"AMAn Maamulaha daaqada ee nidaamka daaqada X. Waxay markii hore ahayd fargeeto daciif ah oo TWM ah oo uu ogaaday Robert Nation sanadkii 1993, taas oo u xuubsiibtay maamulaha daaqada daaqada cajiibka ah, caanka ah, ee dabacsan.".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday wax ka yar 4 sano kahor.
Waxay hadda leedahay nooc deggan (hore: 2.6) iyo nooc horumarineed (mustaqbal: 3.0). Intaa waxaa sii dheer, waxay u hoggaansameysaa heerka ICCCM waana mid aad loo qaabeyn karo.
Waxay u oggolaaneysaa, laga bilaabo qaabeynta ugu yar, in lagu qaabeeyo aaladaha gudaha iyo softiweerka saddexaad si loo habeeyo dhinacyada badankood desktop-ka. Sidaa awgeed, markii lagu daro softiweerka saddexaad iyo qoraallo khaas ah, waxay noqoneysaa aalad awood badan oo lagu dhiso jawi desktop oo dhammaystiran.
Nooca mustaqbalka ee horumarinta waa maareeye daaqad kumbuyuutar ah oo ballaaran, oo asal ahaan ka soo jeeda TWM. Oo waxaa loogu talagalay inay lahaato raad yar oo xusuus ah iyo qaab muuqaal hodan ah, sida inay tahay mid aad loo habeyn karo oo la ballaadhin karo, iyo lahaanshaha heer sare oo ah Motif (MWM).
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "fvwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
“Maareeyaha daaqad la jabsaday oo ku saleysan MLVWM (Macintosh Like Manager Window Virtual), WM-ga wanaagsan ee Takac Hasegawa (hase@rop2.hitachi-cable.co.jp) oo leh muuqaalka MacOS. MLVWM waxay ku salaysnayd TWM iyo FVWM".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ilaa 5 sano.
Waxay haysaa inta badan sifooyinka MLVWM, sidaa darteed waa inuu noqdaa mid aad ula jaan qaadi kara. Waana mid adag, hufan oo khafiif ah.
Waxay bixisaa kombuyuutarro fara badan oo kumbuyuutaro ah, oo la isku habeyn karo Menu Bar, Windows hadheysan, Windows ayaa laga xukumay barta menu. Dhamaan hal xabbo oo koodh ah.
Muuqaalka xiisaha leh ee HaZe, oo sidoo kale laga dhaxlay MLVWM oo si cad u waxyooday Mac OS, ayaa ah buufinnada qoraalka, ee ku dhex jira oo ku kooban muujinta macluumaadka ku saabsan daaqadda jiirku tilmaamayo.
"Waa maamule daaqad nooca Tiling ah ee loogu talagalay X11 adoo adeegsanaya Xlib".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ilaa 2 bilood.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud u maamusho iyo qaabeyn wanaagsan markaad ka socoto khadka taliska, kulul (nool).
Waxay bixisaa isku-dhaf la yaab leh oo ah is-beddelka tooska ah iyo arjiga gacanta, taas oo suurtagal ka dhigaysa in qof kasta oo adeegsada ahi u qaabeeyo qalab toos ah codsi kasta ama u beddelo codsi kasta oo ka yimaada toos otomaatiga ah una beddelo tilmaanta gacanta.
U adeegso qoraalka bash qaabeynta qaab fudud. Meelaha kala duwan (looxyada), isticmaaluhu wuxuu isticmaali karaa naqshado kala duwan, sidoo kale wuxuu u habeyn karaa naqshadaha duulimaadka sida uu u kala dhadhan fiican yahay. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale bixisaa taageero kormeerayaal badan, sidaa darteed badanaa laguuma qasbi inaad isticmaasho hal kormeere.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "herbstluftwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze iyo Herbstluftwm, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze, iyo Herbstluftwm: 5 WMs oo kale oo loogu talagalay Linux
isticmaale aan faraxsaneyn dijo
Ugu dambayntii waxaan go aansaday in aan galo qoraaladan 'saga' ee maareeyayaasha kale ee desktop-ka, waxaanan jeclaan lahaa in aan ku daro hal shay: way fiicnaan lahayd haddii ay kudarsadaan shaashad shaashad ah, midkoodna google, devianart ama websaydhadooda, si aad noo siiso a aragtida sida ay WM kuwani u egyihiin. Waxaa jira waqtiyo marka qoraalka kaligiis uusan badanaa ku filneyn qancin
Ka jawaab isticmaale aan faraxsaneyn
Salaan qaali ah waadna ku mahadsan tahay faalladaada. Xaqiiqdii hal sawir oo WM kasta ah ayaa fiicnaan lahaa, laakiin maaddaama ay jiraan 5 WM qoraal kasta, taasi waxay ka dhigeysaa waxa ku jira inay u muuqdaan kuwo aad u ballaadhan, qoraalladan oo durbaba ka dheer sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee, sidaad horayba u sheegtay, bogagga rasmiga ah badankood waxaa ku yaal shaashad iyaga ka mid ah, xiriiriyeyaashana waxaa lagu heli karaa adigoo gujinaya cinwaanada magaca WM kasta. Laga yaabee, goor dambe waxaan ka sameyn doonnaa qoraal ku saabsan WM kasta oo firfircoon iyada oo la rakibayo iyo talooyin qaabeynta oo leh shaashadahooda kala duwan.
Matthias M. dijo
Wanaagsan "saga" qoraalkan. Waan la socday iyaga tan iyo markii ay bilaabeen. Waxaan sugayaa kuwa kale 🙂
Hadda waxaan joogaa i3, waana wax fiican.
Jawaab ku bixi Matías M.
Salaan Matías! Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga wanaagsan ee ku saabsan qodobbada la xiriira Maareeyayaasha Daaqadaha (WMs). Waxaan horey u daabacnay midka ka kooban I3-WM, waxaan jeclaan lahayn inaan ku darno macluumaad dheeri ah laakiin maadaama ay jiraan 5 halkii boostada, waxyaabaha lagama maarmaanka ah oo lagu daray xiriiriyeyaasha iswaafajinta ayaa la dhigayaa. Ku raaxayso
Kdenlive 20.08 waxay la timid goobo cusub oo shaqo iyo inbadan
Midnimadu waxay la wareegtaa shirkadda Isbaanishka ee Códice Software